I-Kidizoom DX2 yi-VTech, iwotshi ebalaseleyo yabantwana | IPhone iindaba
ULuis Padilla | 21/07/2021 13:01 | IPhone imidlalo, Ezahlukeneyo
Namhlanje sihlalutya isixhobo esikhetheke kakhulu: iwotshi efanelekileyo yabantwana. I-Kidizoom DX2 evela kwi-VTech imnandi, iyanceda abantwana ukuba bafunde kwaye nabazali banokuzola ngayo.
Le wotshi ilumkileyo ayiveli kwa-Apple, ayidibani ne-iPhone yethu, kodwa yenzelwe ngokukodwa abancinci endlwini. IVTech iphumelele isixhobo esirhabaxa, ulonwabo olukhulu kubantwana abancinci endlwini, eya kuthi ibafundise nezinto ezinje ngokwazi ixesha kwi-analogue kwaye iya kubakhuthaza ukuba bandise umsebenzi wabo, kwaye ndothuswa kakhulu kukusebenza kwayo, ndinomdla kwaye ndinempendulo entle evela kwiscreen.
2 Imidlalo, izixhobo kunye nokufunda
3 Akukho xhala kubazali
I-smartwatch yenziwe ngeplastiki, ilula kakhulu (ayifumaneki kangange-100 gram) kwaye intekenteke kancinci kunesinyithi okanye iglasi, ke ilungele ngakumbi ukunxitywa ngumntwana. Inesikrini sokuchukumisa esinobungakanani bee-intshi ezingama-1,44 ngombala opheleleyo, kwaye isebenza ngebhetri edityanisiweyo (engenakutshintshwa) egcwaliswa ngokutsha ngesidibanisi se-microUSB esecaleni nakwintambo efakwe ebhokisini. Ibhetri yayo ine-autonomy eya kwahluka ngokuxhomekeka kwixesha lokusetyenziswa, ukusukela kwiintsuku ezimbalwa ukuba ukusetyenziswa kakhulu, ukuya kwiveki enokusetyenziswa kwesiqhelo. Iswitshi ngasemva kwewotshi ivumela iwotshi ukuba icinywe ngokupheleleyo xa ingazukunxitywa ixesha elide.
Ineekhamera ezimbini, enye ibekwe ngaphambili, ukuthatha iiselfie, kunye nenye ngaphambili. Ivumela ukubanjwa kweefoto ngesisombululo se-640 × 480 kunye nevidiyo ukuya kuthi ga kwimizuzwana engama-60 ubude ngesisombululo se-320 × 240. Ngombulelo kwi-256MB yememori yangaphakathi, yonke into oyifakileyo iya kugcinwa kwiwotshi yayo, kunye nokukhuphelela kwikhompyuter ngentambo ye-microUSB. Umthamo wokugcina umalunga neefoto ezili-1500 kunye nemizuzu eli-10 yevidiyo kwisisombululo esipheleleyo.
Inamaqhosha kwicala lokuhamba kwemenyu, kunye nelinye icala lokuthimba iifoto kunye neevidiyo. Kwakwelo cala linye linesihlanganisi se-microUSB, nesigqubuthelo serabha esithintela ukungena kothuli kunye nokunye ukungcola. I-VTech DX2 ayinamanzi, iyamelana nokutshiza, kodwa akufuneki ifakwe emanzini okanye ifakwe phantsi kwetephu. Yiyo kuphela "kodwa" endinokuyibeka kulewotshi, ethi yona ichaze kunye nokwakha umgangatho ubonakale ugqibelele kubantwana abasendlwini.
Inemitya eqhelekileyo yokubamba isihlahla. Umtya ubungakanani bezihlahla ezincinci, kwaye unemingxunya eyaneleyo yohlengahlengiso ukuya kuthi ga kwiminyaka eyi-10-12 onokuyisebenzisa ngaphandle kweengxaki. Ngumtya onomnwe othambileyo, okhululekileyo ukunxiba, apho ukukhanya kwayo kunegalelo. Inkqubo yokuvalwa kwebuckle ikhuselekile kwaye ithintela ukuhla ngengozi okanye ilahleko.
Imidlalo, izixhobo kunye nokufunda
Iwotshi ayifuni naluphi na uqwalaselo ukuze ikwazi ukuqala ukuyisebenzisa. Nje ukuba umhla kunye nexesha kubonisiwe, yonke imixholo yayo inokusetyenziswa. Imidlalo ilungiselelwe ukuba isetyenziswe ngonxibelelwano olulula kakhulu, ukusuka kwiipuzzle ukuya kwimazes. Abancinci abayi kufuna ngaphezulu kwemizuzwana embalwa ukuze bazi ukuba basebenza njani, kwaye yimidlalo emifutshane kakhulu ethi ngoncedo lwezandi abazikhuphileyo ziya kubavumela ukuba babe nexesha elimnandi. Kukwakho nemidlalo yokufundisa efana naleyo inceda abantwana bazi iiyure ngewotshi yesandla.
Inayo Imidlalo yokwenyani eyongeziweyo, eyenza umntwana ukuba ahambe ukuze izilwanyana zivele kwiscreen kwilizwe lokwenyani, enkosi kwikhamera yangaphambili, ekufuneka bayitshabalalise ngokubona. Okukhona ushukuma ngakumbi kuya kuvela izilo ezikhulu. Ukunyusa ukwenziwa komzimba yinto ebalulekileyo ngaphakathi komxholo weKidizoom DX2., kunye nezicelo ezininzi ezikhuthaza umntwana ukuba atsibe, abaleke, ahambe ... ukufezekisa iinjongo zabo, enkosi kuhlalutyo lwentshukumo olwenziwe ngumlindo ngokusebenzisa isixhobo esikhawulezayo sokuhlanganisa.
Ewe umlindo ngumlindo, kwaye ngenxa yoko ukucofa kuyinxalenye ebalulekileyo. Uneefowuni ezininzi onokutshintsha ngokulula, kunye nokutshintsha phakathi kweanalog kunye newotshi yedijithali, kunye nezinye izixhobo zewotshi efanelekileyo, njengealam, istopwotshi, ikhalenda, isibali-xesha, njl. Konke oku kunonxibelelwano olunomdla kakhulu olusingathwa ngabantwana ngokugqibeleleyo.
Iikhamera ziyinkwenkwezi enkulu yale smartwatch. Abantwana baya kuba nakho ukuthatha ii-selfie okanye iifoto zabahlobo babo okanye ezisingqongileyo, kwaye uziguqule ngezinto ezonwabisayo kunye nezakhelo, ezinokuthi emva koko zikhutshelwe kwikhompyuter okanye zisetyenziswe njengephepha lodonga lobuso bewotshi. Ngomnye wemisebenzi ehlekisayo etsala abona bantwana kakhulu ngale wotshi yeVTech. Kwakhona iividiyo okanye amanqaku elizwi, anokuthi emva koko adlalwe kwisixhobo ngokwaso.
Ukuba wonke lo mxholo wawungonelanga, kwiwebhusayithi yeVTech unokukhuphela i-Explor @ park application (unxibelelwanoZombini iiWindows kunye neMac, ukongeza kuzo ukukhuphela uhlaziyo lwewotshi yethu Unokukhuphela imidlalo emininzi, imixholo kunye neminye imixholo ngaphandle kwentlawulo kwaye uzifake kuwotshi ukuze umxholo wayo wahluke. Zizicelo ezincinci kunye neefayile ezingathathi ndawo, ngenxa yoko awuyi kuba nangxaki ekukhupheleni yonke imixholo oyifunayo. Ukukhuphela iifoto kunye neevidiyo kwikhompyuter yakho, kuya kufuneka uyidibanise kwaye iya kufunyanwa njengogcino lwangaphandle onokutsala kulo umxholo kwi-hard drive yakho, okanye ucime.
Akukho xhala kubazali
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekubukeni kukuba wonke umxholo wayo wenzelwe abancinci endlwini, kwaye akukho thuba lokufikelela nakowuphi na umxholo ongalunganga. Umlindo awunalo naluphi na uhlobo lonxibelelwano, nokuba yi-WiFi okanye iBluetooth, ke akukho bungozi bokuba umntwana akhuphele izinto ezingafanelekanga, okanye asebenzise imali ngaphandle kolawulo lwethu. Akunakwenzeka ukuba umntu alandele iwotshi. Singazola kakhulu ukuba umntwana wethu uyayisebenzisa, into ebaluleke kakhulu xa sithetha ngabantwana abancinci abanjalo.
I-Kidizoom DX2 smartwatch evela kwiVTech yinto efanelekileyo yokudlala yabancinci endlini. Kungenxa yezixhobo kunye nomgangatho wolwakhiwo, kwisoftware enobuchule kunye nakwisikrini sokuchukumisa esineempendulo ezigqwesileyo, kodwa ngaphezulu kwako konke, umxholo wayo uhlengahlengiswe kubantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-12 ubudala kunye nolwahlulo olukhulu olunokukhutshelwa simahla. kwentlawulo. Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo (epinki, ebomvu, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza, bumfusa kunye nerasibheri), inexabiso kwi-59,99 euros kwiAmazon (unxibelelwano).
Ithunyelwe nge: 21 de julio de 2021
Utshintsho lokugqibela: 21 de julio de 2021
Ukukhanya kunye nokukhululeka
Chukumisa isikrini ngokuphendula okuhle
Umxholo ohluke kakhulu kwaye uhlengahlengiswe kubantwana
Khuthaza imisebenzi yomzimba
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Kidizoom DX2 yi-VTech, iwotshi yabantwana efanelekileyo
U-Alvaro J. sitsho
Ayinayo eyona nto ibaluleke kakhulu kubazali: Ukufowuna kunye nokufumana, kule nto ndiyifundileyo, ayisiyonto iyenye ngaphandle komdlalo omncinci womdlalo omncinci.
Phendula kuAlvaro J.
Umdlalo weSixeko seSkate ofumaneka kwiApple Arcade uhlaziywa ukubhiyozela iiOlimpiki zaseTokyo